မကာအိုကို ကမ္ဘာကျော်စေတဲ့ ကာဆီနိုဘုရင် အသက် ၉၈ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်
မကာအိုကို ကမ္ဘာကျော်စေတဲ့ ကာဆီနိုဘုရင် အသက် ၉၈ နှစ...
26 พ.ค. 2563 - 19:54 น.
မကာအိုကျွန်းလေးကို ကမ္ဘာ့လောင်းကစားမြို့တော်အဖြစ် ပြောင်းပေးခဲ့သူလို့ အသိအမှတ်ပြုကြတဲ့ ဟောင်ကောင် သူဌေးကြီး စတန်လီ ဟို အသက် ၉၈ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။
အာရှမှာ အချမ်းသာဆုံးထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့ကို "လောင်းကစားလောကရဲ့ ရှင်ဘုရင်" လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က လောင်းကစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေထဲ အမြတ်အများဆုံးဝင်တဲ့အထဲက တခုဖြစ်တဲ့ SJM Holdings ကုမ္ပဏီကို သူက ဦးဆောင်ခဲ့တာပါ၊ ဒီကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ၆ ဘီလျံလောက် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
အနောက်တိုင်း အကကို မြတ်နိုးခုံမင်ပြီး ခပ်ထည်ထည်နေတတ်တဲ့ ဘီလျံနာ သူဌေးကြီးဟာ လောင်းကစားစီးပွားရေး အကြီးအကျယ်လုပ်ပေမယ့် သူ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ သူ့မိသားစုဝင်တွေကို လောင်းကစားကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အကြံအမြဲပေးတဲ့သတင်းကလည်း အင်မတန် လူပြောသူပြောများ ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်မအဖေဟာ မွန်းလွဲ ၁ နာရီလောက်အချိန်၊ ဟောင်ကောင် နာလန်ထ ဆေးရုံမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ" လို့ ဟိုရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ပန်စီက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
"ဒီသတင်းကို ပါးရတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ မိသားစုအားလုံး သိပ်ကို ဝမ်နည်းကြရတယ်" လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ပေါ်တူဂီ ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မကာအိုမှာ ကာဆီနို စီးပွားရေးကို တယောက်တည်း လွှမ်းမိုးလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရလိုင်စင်ကို ၁၉၆၀ နှစ်တွေတဝိုက်မှာ ဟို ရခဲ့ပါတယ်။
သူ့ဓနကြွယ်ဝတောင့်တင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ မကာအိုထက်ကျော်ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ကာဆီနို လောင်းကစားရုံတွေဖွင့်ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေတောင် အဲဒီ နိုင်ငံစာရင်းထဲပါပါတယ်၊ နောက် ဟောင်ကောင်မှာဆို အိမ်ရာနဲ့ ရုံး အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ ချဲ့ထွင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲ သူ့ အသက် ၉၇နှစ် မွေးနေ့မတိုင်မီ လအနည်းငယ် အလိုမှာ သူ အလုပ်က အနားယူတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဓနဥစ္စာက ဒေါ်လာ ၆.၄ ဘီလျံလောက် ရှိမယ်လို့ မှန်းကြတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဖွင့်တော့ ချမ်းသာသူတွေများလာသလို သူတို့ထဲမှာလည်း လောင်းကစားကို ကြိုက်တဲ့သူတွေ အများသားမို့ ဟိုရဲ့ SJM Holdings ကုမ္ပဏီ ကြီးပွားစည်ပင်လာတာ တရိပ်ရိပ်ပါ။ SJM ဟာ အခုဆိုရင် မကာအိုက ကာဆီနို လောင်းကစားလုပ်ငန်းပေါင်း ၂၀ ကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
ဟို့မှာ ဇနီး ၄ ယောက်ရှိပြီး သားသမီး ၁၇ ယောက်ရှိတယ်လို့ သိထားကြပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာ မိသားစုဝင်တွေကြား တရားစွဲတင်တာတွေ၊ ရှင်းရတာတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အကျော်ဇေယျ တယောက် ကွယ်လွန်ခြင်း
မာတင် ယစ်၊ ဘီဘီစီ တရုတ်ဘာသာ သတင်းဌာန
မကာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်မှာ စတန်လီ ဟိုရဲ့ ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကို တစုံတယောက်က မှန်းဆကြည့်တယ်ဆိုပါစို့။
အဲဒီလိုမှန်းထားချက်ထက်တောင် သူ့ဩဇာကပိုတယ်လို့ ပြောရင် မှားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီဒေသ နှစ်ခုစလုံးမှာ အုပ်ချုပ်မယ့်သူရွေးကြမယ်ဆိုရင် သူပြောတဲ့ စကားက အတော် အရေးပါပါတယ်။
သူကွယ်လွန်တဲ့ ဒီနေ့မှာ တရုတ်အစိုးရ မီဒီယာက သူ့ကို "ပြည်ချစ်စိတ်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တယောက်" လို့ သူ့အတွက် ဝမ်းနည်းစာရေးတဲ့အခါ ထည့်ရေးပါတယ်။
မကာအိုဟာ တံငါမြို့ သေးသေးလေး ဘဝကနေ ကြွယ်ဝလှတဲ့ လောင်းကစား ဗဟိုချက်နေရာ အဖြစ်တိုးတက်လာတာနဲ့အတူ ဟိုရဲ့ ဓန ပွားများလာတာက ချိတ်ဆက်နေလို့ပါ။ လောင်းကစားစီးပွားရေးကို အဲဒီကျွန်းလေးကနေ ကမ္ဘာ့အနှံ့နေရာတွေကို သူချဲ့ထွင်ခဲ့တာပါ။
လာ့စ်ဗေးဂက်စ်က ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ဝင်မလာခင်နဲ့ ဟောင်ကောင် - ကျူဟိုင်း - မကာအို တံတားကြီး (Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge) မဖွင့်သေးခင် အချိန်တွေမှာ ရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ မြန်နှုန်းမြင့် ဖယ်ရီ သင်္ဘောတွေသုံးပြီး ဟောင်ကောင်နဲ့ မကာအိုကြား အမြန်ဆုံးသွားနိုင်အောင် အစောပိုင်းကာလတွေကတည်းက သူ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ အကြောင်းရေးထားတဲ့ အတ္ထုပ္ပတိစာအုပ်တွေ ဟိုက အများကြီးချန်ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီထဲက တချို့မှာဆိုရင် သူ့အရင် ရှေ့က သူဌေးကြီးတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး မကာအို ကာဆီနိုအင်ပါယာကို သူ ဘယ်လို တည်ဆောက်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း အပြည့်နဲ့ပါ။
တချို့မှာတော့ အိမ်ရာလုပ်ငန်းတွေဘက်မှာ သူဌေးကြီး လီကာရှင်းရဲ့ လုပ်ငန်းတွေလောက် သူ့စီးပွားရေးက မကြီးမားပေးမယ့်လည်း ကျော်ကြားတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ သူ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ သူ ဇနီး ၄ ယောက်ကို လက်ထပ်ခဲ့တာ၊ သူ့မိသားစု က ပုလဲမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ တလျောက် လွှမ်းမိုးနိုင်အောင် ဘာတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတာ စတာတွေ ဖော်ပြကြပါတယ်။
သူ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအကြောင်း ပြောရင် အငြင်းအခုံဖြစ်စရာတွေနဲ့ ကင်းလွတ်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သာမန်လူအများအဖို့ သူ့ဇာတ်လမ်းတွေက ကိုယ်စီ ကိုယ်စီရဲ့ အိပ်မက်တွေ ကြီးကြီးမက်ဖို့နဲ့ ချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသလဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်စရာတွေကို ပေးပါတယ်။
"လောင်းကစားလောကရဲ့ ရှင်ဘုရင်" ကတော့ အခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးလောကထဲက လူအများကတော့ ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်တာတွေ ထွေးပွေ့နိုင်ဖို့ အတွက် ပိုကာဖဲ ကစားတဲ့ခုံကနေ သူပေးခဲ့တဲ့ သူ့ အသိပညာတွေကို ရှာဖွေကြဦးမှာပါ။
อัลบั้มภาพ မကာအိုကို ကမ္ဘာကျော်စေတဲ့ ကာဆီနိုဘုရင် အသက် ၉၈ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်